देहातका आमाहरू- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
वैशाख २१, २०७६ तुलानारायण साह
स्वप्नदर्शी र संघर्षशील आमा दुनियाँभरिका आमाहरूमा अनेक असमानता होलान् तर एउटा कुरा समान हुँदो रहेछ  । त्यो हो आमाहरूले आफ्नो सन्तानका लागि सपना देख्ने र त्यसलाई पूरा गराउनका लागि गर्ने संघर्ष  ।
आमा धनी हुन् या गरिब, शिक्षित हुन् या निरक्षर, गाउँकी हुन् या सहरकी त्यसको धेरै ठूलो अर्थ हुँदैन । दुनियाँका हरेक आमाले आफ्नो सन्तानको हित मात्र सोचेकी हुन्छन् ।
मेरी आमाले पनि त्यस्तै गर्नुभएको थियो । मेरो जन्म हुँदा हाम्रो गाउँ गोइठीमा पढाइ लेखाइको खासै माहोल थिएन । सबै जना खेतीपातीमा व्यस्त थिए । दादाजी (बुबापट्टिको हजुरबा) लाई सकेसम्म जग्गा जोड्ने रहर थियो । एसएलसीसम्मको पढाइपछि नै पहाडमा मास्टरी गर्दा हुने उहाँको सोच थियो । तर आमा त्यस कुरामा असहमत हुनुहुन्थ्यो । सकेजति र छोराहरूले चाहेजति पढाउने आमाको चाहना थियो । आमाले बुबालाई कन्भिन्स गर्नुभयो । पछि गएर हाम्रो बुबा र दादाजीबीच यही कुरामा खटपट हुन थाल्यो । दादाजी भन्नुहुन्थ्यो, ‘यत्रो मिहिनेत गरेर कमाएको सबै सम्पत्ति नातिहरूको पढाइ–लेखाइमै लगाइदिने ?’ थप सम्पत्ति आर्जन उहाँको प्राथमिकता थियो ।
आज आएर सोच्छु, गाउँमा त्यस्तो साह्रो पढाइ–लेखाइको माहोल नहुँदा पनि आमाको मनमा यो सपना कहाँबाट पलाउन पुगेको थियो ? उत्तर खोज्दै जाँदा उहाँको माइतबाट आएको थियोजस्तो लाग्छ । हाम्रो मामाघर सप्तरी जिल्लाकै कञ्चनपुर । कञ्चनपुर सानो तर पुरानो बजार । त्यहाँ धेरै पुरानो स्कुल छ । लेखपढको पुरानो माहोल थियो । २०२५ सालतिर मामाले एसएलसी पास गर्नुभएको थियो । भारतबाट पीएचडी गर्नुभयो । लाग्छ, कञ्चनपुरको त्यो लेखपढको माहोल र भाइको पढाइप्रतिको लगाव देखेर मेरो आमाले छोराहरूबारे एउटा सपना देख्नुभयो ।
हाम्रो किसान परिवारलाई खान लाउन समस्या थिएन । मानिसको समस्या थियो । दिदीहरूको बिहा भइसकेपछि आमाबुबालाई सघाउने मानिसको अभाव हुँदै गयो । यता छोराहरूको पढाइ खर्च बढ्दै गयो । परिवारमा अंशबन्डा भयो । खाइपाइ आएको सम्पत्ति घट्न पुग्यो । त्यही बेला (२०५१/५२ सालतिर) गाउँमा आगलागी हुँदा हाम्रो सारा सम्पत्ति जल्यो । बाआमाको जीवनमा सर्वाधिक दुःखको समय थियो त्यो । तर कहिले पढाइ रोक्न भन्नुभएन । सकेजति खर्च जुटाउनुभयो ।
आमाहरूको अनन्त दुःख
आज आएर म आफ्ना छरछिमेकका साथीभाइका घरका अवस्था सम्झिन्छु । उनीहरूको बाल्यकाल, परिवारको अवस्था र आमाहरूको गतिविधिलाई सम्झिन्छु, मेरो आमाको तुलनामा मेरा साथीहरूका आमाहरू कति धेरै दुःख गर्नुहुन्थ्यो । मेरा बालसखाहरू कपिलेश्वर सरदार र लीलु यादव थिए । बाल्यकालमा हामी निकै मिल्थ्यौं । हामीहरूको खाने–बस्ने ठेगान हुँदैन्थ्यो । हामी प्रायःजसो सँगै हुन्थ्यौं । मेरा ती दुवै मित्रको पारिवारिक अवस्था निकै कमजोर थियो । उनीहरूका आमा हाम्रो आमाभन्दा धेरै दुःख गर्नुहुन्थ्यो । मजदुरी गर्नुहुन्थ्यो ।
लीलु यादव कक्षा ६ मा नपुग्दै पन्जाबतिर लागेका थिए । उनी आजपर्यन्त हरियाणाको एक पेपर मिलमा काम गर्छन् । अर्का मित्र कपिलेश्वर सरदार पनि धेरै वर्ष पन्जाब बसे । त्यतैबाट माओवादी बनेर फर्केका थिए । जनयुद्धमा होमिए । जेल बसे । अहिले गाउँमै राजनीति गर्छन् । यी दुवै मित्रका आमाहरू स्वर्गबास भइसकेका छन् । आज आएर सोच्छु, मेरो आमाले देखेको सपनाजस्तै मेरा मित्रहरूका आमाले पनि त सपना देखेका थिए होलान् । कस्तो थियो होला ती आमाहरूको सपना ? छोराहरू सानै उमेरमा पन्जाब जाओस् भन्ने सपना त पक्कै देख्नुभएन होला । तर के कारणले मेरो आमाको सपना पूरा भयो र मेरा मित्रहरूको आमाको सपना पूरा भएन ?
अहिले कपिलेश्वरकी श्रीमती आफ्ना हुर्किसकेका बेरोजगार छोराको भविष्यलाई लिएर निकै चिन्तित रहने गरेको पाउँछु । लीलुकी श्रीमती गाउँमा एक्लै बस्छिन् । अबोध बालकहरूको शिक्षादीक्षालाई लिएर निकै संघर्ष गरिरहेको देख्छु । गाउँमा गरिबी घटेको अवश्य छ तर आमाहरूको दुःख खासै घटेको छैन । बाल्यकालमा लालनपालन र शिक्षादीक्षाको चिन्ता बुबाभन्दा बढी आमालाई हुँदो रहेछ । सन्तान हुर्किसकेपछि तिनको रोजगारको चिन्ता सुरु हुन्छ । अहिले अधिकांश युवाहरू अरब वा मलेसिया गएका छन् । तिनका जहान, आमाबुबा गाउँमा वा नजिकको बजारमा बसेका हुन्छन् । तिनको चिन्ता बिदेसिएका सन्तानको जीवन रक्षासँग जोडिएको हुन्छ ।
एक दशकअघिसम्म हाम्रा गाउँका आमाहरू छोरा द्वन्द्वमा मारिएला भन्ने चिन्ताबाट ग्रस्त थिए । हाम्रो गाउँमा सुरुका दिनमा माओवादीको चर्को प्रभाव थियो । जनयुद्धमा लागेकाहरूको आमाको चिन्ता सम्झिन्छु । जनयुद्धमा नलागेका वा माओवादीविरोधीहरूको आमाको चिन्ता सम्झिन्छु । पात्रहरू फरक फरक थिए, आमाहरू पनि फरक फरक थिए तर ती सबै आमाहरूको चिन्ता एक समान थियो । आ–आफ्नो सन्तानको जीवनरक्षा आमाहरूको चिन्ता हुन्थ्यो, प्रार्थना हुन्थ्यो ।
२०६०/६१ सालतिरको एक प्रसंग सम्झिन्छु । छिमेककी एक महिलाको मुखबाट सुनिएको प्रसंग हो यो । हाम्रो गाउँका एक युवा मधेसी सशस्त्र समूहमा लागेका थिए । माओवादीहरू तिनलाई खोज्दै थिए । उनको आमाले माओवादी र सरकारी पुलिसबाट छोराको जीवनरक्षाका लागि भाकल गरेकी थिइन् । भाकल पनि अनौठो, छोरा कुशल रह्यो भने घरमा २४ घण्टे रामायण पाठ र हनुमान अराधाना गर्ने !
त्यतिबेला हाम्रो टोलछिमेकका युवाहरू कोही माओवादीमा लागेका थिए, कोही मधेसी सशस्त्र समूहहरूमा । हाम्रो गाउँतिर जनतान्त्रिक समूह, मधेसी टाइगर र भाइरस किलर्सको बिगबिगी थियो । कहिलेकाहीं त लाग्थ्यो, मधेसका सबै मुक्तिदाता हाम्रै गाउँतिर बसाइ सरेका छन् । गाउँ पूरै त्रसित थियो । २०६० सालदेखि २०६५ सालबीच हाम्रो र छिमेकी गाउँहरूमा गरी लगभग दुई दर्जन युवाको हत्या भएको थियो ।
त्यतिखेर हाम्रो गाउँतिर तीनथरी सरकारको शासन चलेको भनिन्थ्यो । ज्ञानेन्द्रको शासन रहेकाले प्रहरी वा सेनाको गस्तीलाई पाँच सरकारको मानिस भनिन्थ्यो । माओवादीका लडाकुहरू आउँदा त्यसलाई छ सरकारका मानिस आएको भनिन्थ्यो । मधेसी सशस्त्र समूहका बन्दुकधारीहरू आउँदा सात सरकारका मानिस भनिन्थ्यो । मेरो सम्झनामा मेरा गाउँछिमेकमा आमाहरू सबैभन्दा बढी त्रसित भएको समय त्यतिबेला थियो । माथि उल्लिखित आमाको पीडा, छोराछोरीको जीवन रक्षाका लागि भगवान्प्रति तिनको आस्था मेरा लागि अविस्मरणीय बनेको छ ।
मेरो गाउँ मिथिलाक्षेत्रका एक प्रतिनिधि गाउँ हो । पछिल्लो समय गाउँका आमाहरू धार्मिक गतिविधिमा जबर्जस्त प्रकारले लागेको देख्छु । २०४४ सालसम्म गाउँमा बस्दा आमाका दौंतरीहरूले गर्ने गरेको धार्मिक गतिविधिको सम्झना छ । घरमा एउटा पूजाकोठा हुन्थ्यो । अहिले पनि छ । त्यसलाई हामी गोसाइघर भन्छौं । हाम्रो गाउँमा हरेक आँगनमा एउटा गोसाइघर हुन्छ नै । गोसाइको पूजा गर्नुको मूल उद्देश्य परिवारमा सबैको सुख शान्तिको कामना गर्नु हो । हाम्री आमालाई त्यतिले पुग्दैन्थ्यो । उहाँ लामो समयसम्म आइतबारको दिन व्रत बस्नुभयो । त्यसपछि महिना महिनामा आउने एकादशी व्रत पनि बस्नुहुन्थ्यो । कहिले मगंलबारे, कहिले बिहीबारे व्रत पनि बस्नुहुन्थ्यो । पछि आएर थाहा भयो, गोसाइघरमा हुने पूजा पूरै परिवारका लागि रहेछ भने एकादशी, आइतबार, मगंलबार गरिने व्रतहरू खास छोराछोरीका लागी गरिएको भाकल पूरा गर्न रहेछ ।
आजभोलि मेरो आमा र उहाँका दौंतरहरूको पूजापाठ गर्ने तौरतरिकामा आमूल परिवर्तन भएको छ । गाउँभरिका महिलाहरू राम्रो नयाँ लुगा लगाएर महिनाको एक दिन पोखरीको डिलमा जम्मा हुँदारहेछन् । त्यस समूहमा युवतीदेखि वृद्ध आमासम्म हुँदा रहेछन् । बुझ्दै जाँदा सन्तोषी समूह बनेको रहेछ हाम्रो गाउँमा । थप बुझ्दा यस्तो समूह त टोलैपिच्छे बन्दा रहेछन् । संयोगले एक पटक सातासम्म गाउँमै बस्नुपर्ने भयो । राति अबेरसम्म छिमेकमा लाउडस्पिकर बजेको बज्यै गर्‍यो । महिलाहरूले शिवजीको प्रार्थना गरेको लाउडस्पिकरमै सुनिन्थ्यो । मैथिली भाषामै आफ्नो दुःखको बयान, छोरीको बिहेको कामना, छोराको जागिरका लागि अनुनयविनय गरिरहेको सुनिन्थ्यो । सुन्दाखेरी लाग्थ्यो कि महिलाहरू कुनै टाढाको भगवान्सँग प्रार्थना गरिरहेको नभई आमने–सामने वार्तालाप गरिरहेका छन् । पछि थाहा भयो, यो त आमाहरूको शिव चर्चा समूह रहेछ । त्यस्ता समूहहरू पनि टोलैपिच्छे रहेछन् । कतै साप्ताहिक त कतै मासिक रूपमा त्यस्तो प्रार्थना सभाहरू आयोजना हुँदा रहेछन्ण् ।
मेरी आमाको पनि पूजा गर्ने तौरतरिकामा बदलाव आएको छ । दशकअघिसम्म पिताजी हुँदासम्म गोसाइघरमा एक कुनामा मात्र पूजा हुन्थ्यो । आँगनमा रहेको धजामा पनि पूजा गरिन्थ्यो । त्यसबाहेक चौरचन, घडी इत्यादि जस्ता पर्वमा घरको देउताको पूजाआजा त हुने नै भयो । पिताजीको देहान्तपछि आमाको पूजाआजा गर्ने तौरतरिका फेरिएको छ । पाँच वर्षअघि आमा केही महिनाका लागि भारत यात्रामा हुनुहुन्थ्यो । आमाको भाइ र बहिनीको बसोबास उतै रहेकाले उहाँहरूसँग विभिन्न तीर्थस्थलको भ्रमण पनि गर्नुभयो । उताबाट फर्केर आएपछि अनेक भगवान्का दर्जनजति फोटोहरू बोकेर आउनुभयो । कुनै–कुनै फोटोमा १०/१५ वटासम्म देवीदेवता अंकित छन् । गोसाइघरको एक कुनामा पारिवारिक देउताको स्थान छुट्याइएकै थियो । आमाले घरको अर्को कुना पनि कब्जा गर्नुभयो । सबै फोटाहरू भुन्ड्याइएको छ । आमाले लगभग हरेक दिन पूजा गर्नुहुन्छ ।
बितेको साउन महिनाको घडी पर्वमा पूजा गर्ने पालो मेरो परेको थियो । आमाको निर्देशन कडा थियो । सम्पूर्ण फोटाहरू पुछ्नुपर्ने । सकेसम्म फोटामा अंकित सबै देवीदेवताको स्नान हुनेगरी सफा गरिनुपर्ने । सरसफाइपछि कुनैलाई सिंगै फूल त कुनैलाई फूलका पात भए पनि हुनेगरी फूलपात चढाइयो । त्यसपछि मिठाई चढाउने पालो थियो । सबैलाई सिंगैसिंगै लड्डु चढाउँदा धेरै चाहिने भएकाले फोडेर चढाएँ । तर, अलि ठूलो तस्बिर भएको देउताको अगाडि सिंगै लड्डु चढाउन भन्नुभयो । मैले सबै देउतालाई सगोलमै एकै ठाउँमा सबै लडडु राखिदिऊँ भनें, आमाले मान्नुभएन । अन्तमा फूल, पान, सुपारी, लड्डु हातमा राखेर आँखा चिम्लेर एक छिन ध्यान गर्नुपर्ने भयो । त्यतिबेला मलाई लाग्यो, बुढेसकालमा आमाले घरमा देउताहरूको आमसभा लगाउनुभएको रहेछ ।
अन्तमा एक छिन ढोका बन्द गरेर बाहिर बस्नुपर्ने भयो । त्यो भगवान्लाई प्रसाद ग्रहण दिइएको समय रहेछ । मैले भने धेरै बेर ढोका बन्द नगरौं, धेरै लड्डु खाएर भगवान्लाई डायबिटिज होला !
पूजा सक्दा दिउसोको १२ बजिसकेको थियो ।
मैले आमालाई अलिक नरम भाषामा सोधें, ‘यति विषद पूजा गरेर तपाईंलाई के होलाजस्तो लाग्छ ?’
‘सबै सन्तानहरू सुखी, सम्पन्न रहुन् । यसबाहेक अरू के नै कामना गर्नु !’ मनमा लाग्यो, दुनियाँमा दुःखी हुनलाई दुःख नै भोग्नु नपर्ने रहेछ । सबैका दुःखका आफ्नै कथा हुँदा रहेछन् ।
दुनियाँका सबै आमालाई सतत् प्रणाम ।
प्रकाशित : वैशाख २१, २०७६ १०:०३
पानी मधेसको जीवनदायिनी
फाल्गुन २२, २०७५ तुलानारायण साह
काठमाडौँ — गएको माघ १२ गते कान्तिपुरमा मधुकर उपाध्याको ‘पानीको कुरा पछि गरौँ’ पढेपछि यो रचना आवश्यक ठानेँ । मधुकर उपाध्यालाई म गुरु मान्छु । २०६१/६२ सालतिर हामी एउटै संस्थामा काम गर्थ्यौँ । अजय दीक्षित, दीपक ज्ञवाली, सुधीन्द्र शर्मा, मधुकर उपाध्याजस्ता पानीविज्ञहरू कुनै बेला एउटै संस्थामा कार्यरत थिए ।
दिनरात पानीकै कुरा हुने । पानी व्यवस्थापनका अनेक आयामबारे हामी घन्टौँ गफिन्थ्यौँ । लेखमा एउटा तरकारी पसलको सामान्य लाग्ने संवाद (कागती किन्दाको प्रसंग) लाई जसरी मधुकर उपाध्याले पहाडी क्षेत्रको पानीको स्रोत व्यवस्थापनसँग जोडेका छन्, त्यसले मेरो मानसपटलमा मधेसका गाउँठाउँका अनेक प्रसंग ताजा भएर आए। ग्रामीण किसान परिवारमा जन्मे–हुर्केको मानिस, पानीबारे चाहेर पनि चुप रहन सक्दिनँ ।
मधेसमा पनि उस्तै
पानीको स्रोत पहाडमा मात्रै होइन, मधेसमा पनि सुक्दै गइरहेको छ । मेरो जन्मघर सप्तरी जिल्लाको गोइठी गाउँमा छ । हाम्रो घरको अगाडि लगभग सय वर्ष पुरानो पोखरी छ । टाँस्सिएकै अर्को पनि पोखरी छ । तर त्यो अलिक नयाँ हो । ती दुवै पोखरीमा नुहाउँदै, पौडी खेल्दै हुर्के–बढेको हुँ म । केही वर्ष अघिसम्म ती पोखरीहरूमा वैशाख, जेठ महिनामा मात्र पानीको मात्रा आधाजति घट्थ्यो । साउन, भदौको वर्षायाममा फेरि भरिन्थ्यो । गाउँभरिका गाईवस्तुका लागि पानी खाने, नुहाउने ठाउँ त्यही पोखरी थियो । ७/८ वर्ष अघिसम्म जाडो बिदामा छोराहरूलाई लिएर घर जाँदा जहिले पनि पोखरीको त्रास मनमा खेलिरहन्थ्यो । बच्चाहरू खेल्दै गएर पोखरीको पानीमा डुब्ने त होइन ! एक त घरै अगाडि पोखरी, त्यसमाथि टन्नै पानी । तर हालका वर्षहरूमा ती पोखरीहरू चाँडै सुक्दारहेछन् । यस पटक पुस, माघ महिनामा हाम्रो पोखरीमा थोप्पै पानी थिएन । गाउँका मानिस गाई–गोरुलाई पानी खुवाउन पनि ट्युबवेलको भर पर्नुपरेको छ । भैँसी नुहाउन पनि ट्युबवेलकै पानी प्रयोग भइरहेको देखियो ।
यो समस्या सप्तरी मात्रको होइन । हालै सप्तरीदेखि कपिलवस्तुसम्मको ग्रामीण भेग घुम्ने अवसर मिलेको थियो । मानवशास्त्री जनक राई सहितको हाम्रो टोलीले प्रायः हुलाकी सडक प्रयोग गरेको थियो । बाटामा देखिएका अधिकांश पोखरीमा कि त पानी थोरै देखिन्थ्यो कि सुकेका थिए ।
कपिलवस्तु जिल्लाको महराजगन्ज नगरपालिकाको कार्यालय नजिकै रहेको पोखरीको डिलमा घर भएका जगदीश खटिक, गंगाराम खटिकसँग लामो कुराकानी गरेको थिएँ । पोखरीमा पानी थिएन । कारण सोध्दा यस वर्ष पोखरीमा सुरुदेखि नै पानी कमै रहेकाले चाँडै सुकेको जवाफ पाइयो । वरिपरि खेत भएका किसानले गहुँबालीमा सिँचाइ गर्न पनि पाइएनछन्। केही वर्षयता पोखरीमा पानी चाँडै सुक्ने गरेको अन्य स्थानीय बासिन्दाहरूको पनि भनाइ थियो ।
द्वन्द्वको बीउ पोखरी
मधेसी समाजमा पोखरीका अनेक उपयोग हुन्छन् । कृषिमा आधारित समाज भएका कारण लगभग हरेक घरमा गाई, गोरु, भैँसी पाल्नु सामान्य मानिन्छ । वस्तुभाउलाई पानी खुवाउन तथा नुहाउन पोखरीको सर्वाधिक उपयोग हुन्छ । मधेसका पुराना बस्तीहरू उत्तर–दक्षिण गरी बसेका हुन्छन् । प्रायः सडक पनि उत्तरबाट दक्षिण नै बनेका हुन्छन् । यसको मूल कारण पानीको बहाव हो । वर्षाको पानी उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बग्ने भएकाले सडक त्यसको अवरोधक नबनोस्, बरु तटबन्धको काम गरोस् भन्ने उद्देश्य हुनुपर्छ । वर्षाको पानी सकेसम्म गाउँबस्तीमा नजमोस्, बरु पोखरीमा गएर जम्मा होस् भन्ने उद्देश्यले बस्तीपिच्छे पोखरीको निर्माण भएको हुनुपर्छ । मैले आफ्नो गाउँका बूढापाकाहरूबाट सुनेको कुरा यही हो । यही कारण नै हाम्रा पुर्खाले गाउँको पुछारमा पोखरी खनाएका थिए, जुन संयोगले हाम्रै घर अगाडि परेको छ ।
मधेसतिरका पुराना बस्तीलाई गाउँ, ब्लकमा राखिएको थियो । नापी नगरिएकाले जग्गाधनीसँग त्यसको प्रमाणपत्र हुँदैन । अहिले पनि धेरैसँग छैन । हाम्रै टोलमा दुई वर्ष अघिमात्र गाउँ, ब्लकको नापी भएको छ । बस्ती विकाससँगै खनाइएका पोखरीहरूको नापी हुने कुरै थिएन । २००३ सालमा नापी खटिंँदा खेतीयोग्य जग्गामात्र नापिएको थियो । पोखरी खनेकाहरूमध्ये कसै–कसैले नापी पनि गराएका थिए । तर त्यतिबेला एउटा ठूलो डर थियो । त्यो पोखरीमा डुबेर कसैको मृत्यु भयो भने पोखरी धनीलाई ज्यान मारेको मुद्दा लाग्थ्यो । त्यसैकारण धेरैले पोखरीको डिलमात्र नापी गराएका थिए, पानी जम्ने ठाउँको नापी गराएका थिएनन् । पोखरी खन्ने बेला गाउँका हुनेखानेले खर्च दिएका हुन्थे । तर पोखरी सार्वजनिक नै हुन्थ्यो । त्यतिबेला पोखरीको कमर्सियल महत्त्व थिएन ।
व्यावसायिक माछा पालन गरिँंदैन थियो । पछिल्लो समय मिथिला क्षेत्रको पोखरीमा व्यावसायिक माछापालन हुनथाल्यो । यसले पोखरीलाई एक प्रकारको आम्दानीको स्रोतको रूपमा परिणत गरिदियो । त्यति हुँदा पनि जुन परिवारका पूर्वजले पोखरी खनाएका हुन्थे, तिनैले त्यसको आम्दानी बाँड्थे । २०५४ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएपछि त्यस्ता पोखरीहरूमा द्वैध स्वामित्वको अवस्था सिर्जना भयो । भोगचलन गरिआएका परिवारले पोखरीलाई आफ्नो सम्पत्ति ठान्थे भने स्थानीय निकायले आफ्नो सम्पत्ति । त्यसपछि ग्रामीण समाजमा द्वन्द्वको स्वरूप नै फेरियो । गाविसले आम्दानीका लागि त्यस्ता पोखरीहरू ठेक्का लगाउन थाले । भोगचलन गरिआएकाहरूले पनि दाबी छाडेनन् । गाविसमा जसको वर्चस्व हुन्थ्यो, उसकै पक्षका मानिसको पोखरी भए एक प्रकारको परिस्थिति बन्थ्यो । पोखरीवालाहरू अर्को पक्षका भए द्वन्द्व सिर्जना हुन्थ्यो ।
विवाद बढेपछि अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम मधेसमा सामान्य भएको छ । अहिले मिथिला क्षेत्रको विरलै कुनै पोखरी होला, जहाँ यस्तो विवाद नहोस् । स्थानीय तहको नयाँ व्यवस्था अनुरुप त्यस्तो पोखरीबारे सिफारिस गर्ने जिम्मा वडा कार्यालयमा गएको छ । रवैया पुरानै छ । पोखरीको कारण मधेसमा हत्यासम्म हुने गरेका अनेकौं घटना छन् । मेरा पूर्वजले खनाएका पोखरीमा पनि अहिले मुद्दा परेको छ । कुनै दिन त्यहाँ हिंसात्मक झडप हुनसक्ने सम्भावना छ । यसरी मधेसी समाजमा पोखरी द्वन्द्वको बीउ बन्न पुगेको छ ।
नहरको उस्तै कथा
चन्द्र नहरलाई नेपालको सबैभन्दा पुरानो नहर प्रणाली मानिन्छ । उदयपुरबाट सप्तरीको फत्तेपुर हुँदै कोशीमा मिसिने त्रियुगा नदीको पानी चन्द्र नहरको पानीको मुख्य स्रोत हो । त्यही चन्द्र नहरको एक शाखा गोइठी नहरको पानीबाट हाम्रो गाउँमा सिंचाइ हुन्छ । अर्थात, त्रियुगा नदीको पानीबाट सिञ्चित जग्गा–जमिनबाट उब्जेको धान, गहुँ खाएर हामी पालिएका हौं । पछिल्लो समय नहरमा पानी कम आउने, ढिलो आउने र चाँडै सुक्ने समस्याबाट हाम्रो गाउँका किसानहरू वर्षेनि पीडित हुनथालेका छन् । चन्द्र नहरको मुहान फत्तेपुरभन्दा माथि उदयपुर जिल्लामा त्रियुगा खोलाबाट अनेक नाला निकालिएको पुछारका गाउँलेहरूको गुनासो छ । त्रियुगामै पानीको बहाव कम भएको हुनसक्छ । सत्य के हो, मलाई थाहा छैन । तर हाम्रो गाउँ जो पुछारमा पर्छ, त्यहाँ वर्षेनि पानी अपुग भइरहेको छ । किसानहरू पीडित छन् ।
केही वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन इन्स्टिच्युट (आईडब्लुएमआई) र नेदरल्यान्डको वानेगन विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूसँग हामी सुनसरीको अमरुवा गाउँमा सिंचाइको अवस्थाबारे अध्ययनका लागि गएका थियौं । अमरुवा गाउँ सुनसरी मोरङ सिंचाइ कमान्ड एरियामा पर्छ र त्यस गाउँमा दुइटा शाखा नहर (रामगन्ज र सीतागन्ज) पुगेका छन् । तर त्यहाँका किसानहरू प्रायः बोरिङबाटै सिंचाइ गर्दारहेछन् । गाउँ नहरको पुछारमा परेकाले पानी नै नपुग्ने गरेको स्थानीय किसानहरूको गुनासो थियो । हालै हामी रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्र पुग्दा नहरको बीचमा (दुवै डिलको बीचको भाग जहाँबाट पानी बग्छ) अनेकौं ठाउँमा बोरिङ गाडिएको देखियो । त्यस्ता बोरिङमा पम्पसेट जडान गरेर मोटा–मोटा पाइपमार्फत पानी खेतसम्म लगिरहेको देख्दा अचम्म लागेको थियो ।
यस्तो किन भएको होला भनेर बुझ्न मन लाग्यो । सन् १९५० को दशकसम्म मर्चवार क्षेत्रमा परम्परागत सीप र साधनको प्रयोगबाट सिंचाइ हुने गर्थ्यो । वर्षेनि मर्चवारका हजारौं किसान गएर गुरबानिया भन्ने ठाउँमा तिनाउ खोलामा अस्थायी बाँध बनाउँथे । त्यस बाँधले सुक्खा समयमा पानी जम्मा गरेर राख्थ्यो । पुरानो कुलो, पैनीको संरचना वा अन्य कुनै तरिकाबाट मर्चवार क्षेत्रमा सिंचाइ हुन्थ्यो । वर्षायाममा ठूलो बाढी आएपछि त्यो बाँध बग्थ्यो । अर्को वर्ष फेरि त्यही तरिकाबाट सिंचाइ गरिन्थ्यो । सन् १९६१/६२ तिर भारत सरकारको सहयोगमा बुटवल नजिक तिनाउ नदीमा हात्तीसुँढे बराज निर्माण भयो । मर्चवार क्षेत्रभरि नहर बनाइयो । बराज बनेको अर्को वर्ष नै तिनाउमा ठूलो बाढी आयो । नदीको बहाव नै परिवर्तन गरिदियो । बराज भएको ठाउँमा पानी नै बगेन ।
नदीको नयाँ बाटोमा नयाँ बराज बनाए मात्र त्यो भारतीय नहरमा पानी ल्याउन सकिने अवस्था सिर्जना भयो । अहिलेसम्म नयाँ बराज बनेन । गुरबानियामा प्रयोग गरिँदै आएका पुराना स्थानीय प्रविधिको विकल्पमा हात्तीसुँढे बराज बनेको थियो । न पुरानो रह्यो, न नयाँले काम दियो । मर्चवारबासीलाई निकै अप्ठ्यारो पर्‍यो । धेरैपछि भारतीय नहरको केही भागमा लिफ्ट सिंचाइ प्रविधि उपयोगमा ल्याइयो । तर अधिकांश भूभाग स्थानीय बासिन्दाले आफ्नै बलबुँतामा खेतीपाती गर्छन् । बाँकी भाग प्रयोगविहीन छ । त्यसकारण त्यो नहरमा ठाउँ–ठाउँमा बोरिङ गाडिएको छ । यसबारे जलस्रोत विज्ञहरू दीपक ज्ञवाली र अजय दीक्षितले अनेकौं लेख लेखेका छन् ।
पानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अनेक अनौठा उदाहरण मधेसमा देख्न/सुन्न पाइन्छ । विकासको नाममा भौतिक संरचना निर्माणलाई जोड दिएर मात्र समस्याको समाधान हुने होइन । राज्यको पुनर्संरचनापछि विभिन्न तहका सरकारले यसबारे नयाँ तरिकाले सोच्नु जरुरी छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७५ ०९:११